Manchester United oo dhinaca dhulka loo dhigay - BBC News Somali
Manchester United oo dhinaca dhulka loo dhigay
Kooxda Manchester United ayaa shalay markii ugu horreysay laga badiyay intii uu socday tartanka horyaalka Ingiriiska ee sanadkan. Waxaa kaloo guul darrada Manchester United macne weyn u yeelay in kooxda ka badisay oo ah Wolves ay tahay tan ugu hooseysa 20-ka kooxood ee ku tartamaya horyaalka premier league. Waxaana taas aad ugu farxay kooxaha safka hore kaga jira tartanka iyadoo kooxda manchester United aan hore looga badin 29 ciyaarood oo ay u safatay intii tartanku socday.
Kulankii shalay dhexmaray Manchester United iyo Wolves waxaa goolka ku hormartay ManU oo saddex daqiiqo oo keliya markii ay ciyaartu socotay uu gool u dhaliyay laacibka Nani hase ahaatee waxaa muddo yar kaddib Wolves gool u dhaliyay ciyaartoyga Elokobi, waxaana gool 2aad u dhaliyay Kevin Doyle ka waqti yar kahor intii aanay dhammaan qaybta 1aad ee ciyaartu.
Manchester United-na ma helin fursan dambe oo ay gool ku dhaliso. Waxaana ay ciyaartaasi ku dhammaatay 2-1 ay guushii ku raacday kooxda Wolves oo shalay kahor loo maleynayay inay dib ugu noqon doonto kooxaha heerka 2aad hase ahaatee aan hadda kadib lagu tirin karin inay hoos u noqonayso maadaama ciyaaro kale u harsan yihiin.
Manchester United waxaa ka maqnaa difaaca numberka 5aad Rio Ferdinand oo loo maleynayo in taasi saameyn ku yeelatay guul darrada ay shalay la kulantay. waxaa la arkayay tababaraha Manchester United Sir Alex Ferguson iyo kooxda oo dhammaantood jaha-wareer ka muuqdo markii ay garoonka ka baxayeen.